သရဲခြောက်တယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ သန်လျင်မြို့က အိမ်ပျက်ကြီး – WunYan
အခုတစ်လော အွန်လိုင်းမှာရော လူတွေကြားထဲမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အိမ်ပျက်ကြီးကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာက တကယ်တော့ HE ရဲ့အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတာရော သွားရလာရမခက်လို့ ရောက်သွားတယ်ပေါ့။ အရင်တုန်းက ပွင့်လင်းရာသီမှာတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်လာကြတဲ့ လူတော်တော်များများတွေ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအချိန်မိုးရာသီမှာတော့ တကယ်ခြောက်ခြားစရာပါ၊
>> တကယ်ရော သရဲခြောက်လား ?
သရဲခြောက်တယ်လို့တော့ လူပြောများကြတယ် ဒါပေမယ့် He & She သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ညနေစောင်းဆိုပေမယ့်လည်း အေးအေးဆေးဆေးပါ၊ သရဲနဲ့တူတာတော့ ဘာမှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ တစ်အိမ်လုံးမှာ ကိုယ်တွေပဲရှိတယ် .. တော်တော်ခြောက်ခြားစရာပါ။ တကယ်ခြောက်ခြားချင်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သရဲကားမကြည့်ဘဲနဲ့ ဒီလိုဖီလင်လေး ရစေပါတယ်။
SHE မရောက်ဖူးလို့ လိုက်ပို့ပေးတာ ဆိုပေမယ့် ရောက်သွားတော့လဲ နေရာကြီးက အလန်းစားကြီးဆိုတော့ စိတ္တဇ ဆန်ဆန်၊ သရဲဆန်ဆန် ပုံစံလေးတွေတော့ရိုက်ခဲ့တယ်။ တမင်တကာ ကြောက်အောင်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးနော် အဲ့ဒီတုန်းက အဲ့လိုဖီလင်လေး ၀င်သွားလို့ **
အိမ်ကြီးကတော့ နှစ်ထပ်အိမ်၊ ဖွဲ့ထားတဲ့ အခန်းတွေလဲ အများကြီးပဲ၊ ရေနံစက်ရုံဝန်းထဲမှာရှိတာဆိုတော့ အရင်တုန်းက အရာရှိတွေအတွက် ဆောက်ပေးထားပုံရပါတယ်၊ ကိုလိုနီခေတ်ဟောင်းပုံစံပါ၊ တစ်အိမ်လုံး သစ်သားတွေနဲ့ အများစု သုံးထားပါတယ်။ ရေနံချေးကောင်းကောင်းသုတ်ထားတယ်ထင်တယ်၊
ပျဉ်တွေ အားလုံးက မည်းနက်နေရော၊ အပေါ်ထပ်မှာဆို ကြမ်းခင်းတွေနင်းလိုက်ရင် တကြွိကြွိနဲ့ အသံတွေကြားရတယ်၊ တခါးတွေဘာတွေ တွန်းဖွင့်ရင်လဲ ကျွီ ….. ဆိုအသံကြီးနဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေတော့ ကျောချမ်းစရာ။
>> ပုတ်အက်အက် အနံတွေ
လူမနေပဲ ပစ်ထားတော့ အနံ့အသက်တွေတော့သိပ်မကောင်းဘူး၊ ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာလိုနေရာမျိုးတွေဆို ပိုဆိုးတယ်၊ လှေကားအောက်က အံဝှက်တံခါးတွေဘာတွေတောင် တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဘာတွေရှိမှန်းမသိလို့ ဆက်မ၀င်တော့တာပါ၊
ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကတော့ အရမ်းကိုအေးချမ်းလွန်းတယ်၊ အခုခေတ်ဈေးနဲ့သာဆို သိန်းသောင်းချီအောင် ပေါက်မယ့်နေရာမျိုး အိမ်ရှေ့ဝရန်တာကနေလှမ်းကြည့်ရင် ရေပြင်ကျယ်ကြီးနဲ့ သန်လျှင်တံတားကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်၊
အခန်းတွေထဲ လျှောက်လျှောက်ဝင်ကြည့်ရင်း အရင်တုန်းက ဘယ်သူတွေများနေခဲ့လဲ၊ အရင်တုန်းက အခန်းတွင်း အပြင်အဆင်တွေကို မြင်ယောင်ကြည့်မိတယ်၊ တော်တော်ကြီးကို ခမ်းနားလိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်းပဲ။
နေရာကတော့ သွားရလွယ်ပါတယ်၊ သန်လျှင်တံတားဆင်းဆင်းချင်း သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင် ရှိပါတယ်၊ အဲ့ဒီလမ်းကြားလေးကနေ ၀င်ပြီး ညာဘက် ချိုး၊ ပြီးရင် ကုန်းပေါ်တက်လိုက်လို့ နည်းနည်း မောင်းလိုက်ရင် ဆုတောင်းပြည့် ဓါတ်တောင်ကုန်း စေတီတော်တစ်ဆူ တွေ့ပါမယ်၊ အဲ့ဒီဘေးနားက ကပ်လျပ်အိမ်ကြီးပါပဲ။
ဒီနေရာက ဘယ်သူပိုင်တယ်၊ ၀င်ရ၊ မ၀င်ရ ဆိုင်းဘုတ်တွေဘာတွေတော့ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး၊ အိမ်ကြီးကတော့ တော်တော်ကြီး ဆွေးမြေ့နေပြီဆိုတော့ သွားမယ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူပြီး အစစအရာရာ သတိကြီးကြီးထားပြီးသွားပါ၊ တစ်ယောက်တည်းတော့ မသွားပါနဲ့၊ လူပြတ်တော့ စိုးရိမ်လို့ပါ။
*** ဒီအိမ်ကြီးထဲကို စပ်စပ်စုစုနဲ့ ပြီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ အပိုင်းအစတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်၊ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရတာထက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ပိုကောင်းမှာပါ၊ စိတ်ဝင်စားလို့ ကြည့်ချင်ရင် Comment ပေးခဲ့နော် ***
နောက်ထပ်လည်း He & She ကနေ နေရာလှလှလေးတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာမို့ စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနော်။
Credit’-He & She
သရဲခွောကျတယျလို့ နာမညျကွီးနတေဲ့ သနျလငျြမွို့က အိမျပကျြကွီး
အခုတဈလော အှနျလိုငျးမှာရော လူတှကွေားထဲမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ အိမျပကျြကွီးကိုရောကျဖွဈတယျ။ ဒီနရောက တကယျတော့ HE ရဲ့အိမျနဲ့ သိပျမဝေးတာရော သှားရလာရမခကျလို့ ရောကျသှားတယျပေါ့။ အရငျတုနျးက ပှငျ့လငျးရာသီမှာတော့ ဓါတျပုံရိုကျလာကွတဲ့ လူတျောတျောမြားမြားတှရေ့တယျ၊ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုအခြိနျမိုးရာသီမှာတော့ တကယျခွောကျခွားစရာပါ၊
>> တကယျရော သရဲခွောကျလား ?
သရဲခွောကျတယျလို့တော့ လူပွောမြားကွတယျ ဒါပမေယျ့ He & She သှားတဲ့အခြိနျမှာတော့ ညနစေောငျးဆိုပမေယျ့လညျး အေးအေးဆေးဆေးပါ၊ သရဲနဲ့တူတာတော့ ဘာမှမတှခေဲ့ရပါဘူး။ တဈအိမျလုံးမှာ ကိုယျတှပေဲရှိတယျ .. တျောတျောခွောကျခွားစရာပါ။ တကယျခွောကျခွားခငျြတဲ့ စိတျလှုပျရှားခငျြတယျဆိုရငျတော့ သရဲကားမကွညျ့ဘဲနဲ့ ဒီလိုဖီလငျလေး ရစပေါတယျ။
SHE မရောကျဖူးလို့ လိုကျပို့ပေးတာ ဆိုပမေယျ့ ရောကျသှားတော့လဲ နရောကွီးက အလနျးစားကွီးဆိုတော့ စိတ်တဇ ဆနျဆနျ၊ သရဲဆနျဆနျ ပုံစံလေးတှတေော့ရိုကျခဲ့တယျ။ တမငျတကာ ကွောကျအောငျလုပျတာ မဟုတျဘူးနျော အဲ့ဒီတုနျးက အဲ့လိုဖီလငျလေး ဝငျသှားလို့ **
အိမျကွီးကတော့ နှဈထပျအိမျ၊ ဖှဲ့ထားတဲ့ အခနျးတှလေဲ အမြားကွီးပဲ၊ ရနေံစကျရုံဝနျးထဲမှာရှိတာဆိုတော့ အရငျတုနျးက အရာရှိတှအေတှကျ ဆောကျပေးထားပုံရပါတယျ၊ ကိုလိုနီခတျေဟောငျးပုံစံပါ၊ တဈအိမျလုံး သဈသားတှနေဲ့ အမြားစု သုံးထားပါတယျ။ ရနေံခြေးကောငျးကောငျးသုတျထားတယျထငျတယျ၊
ပဉျြတှေ အားလုံးက မညျးနကျနရေော၊ အပျေါထပျမှာဆို ကွမျးခငျးတှနေငျးလိုကျရငျ တကွှိကွှိနဲ့ အသံတှကွေားရတယျ၊ တခါးတှဘောတှေ တှနျးဖှငျ့ရငျလဲ ကြှီ ….. ဆိုအသံကွီးနဲ့ ပါတျဝနျးကငျြတဈခုလုံး တိတျဆိတျနတေော့ ကြောခမျြးစရာ။
>> ပုတျအကျအကျ အနံတှေ
လူမနပေဲ ပဈထားတော့ အနံ့အသကျတှတေော့သိပျမကောငျးဘူး၊ ရခြေိုးခနျးနဲ့ အိမျသာလိုနရောမြိုးတှဆေို ပိုဆိုးတယျ၊ လှကေားအောကျက အံဝှကျတံခါးတှဘောတှတေောငျ တှခေဲ့ရတယျ၊ ဘာတှရှေိမှနျးမသိလို့ ဆကျမဝငျတော့တာပါ၊
ပတျဝနျးကငျြအနအေထားကတော့ အရမျးကိုအေးခမျြးလှနျးတယျ၊ အခုခတျေဈေးနဲ့သာဆို သိနျးသောငျးခြီအောငျ ပေါကျမယျ့နရောမြိုး အိမျရှဝေ့ရနျတာကနလှေမျးကွညျ့ရငျ ရပွေငျကယျြကွီးနဲ့ သနျလြှငျတံတားကွီးကိုလှမျးမွငျနရေတယျ၊
အခနျးတှထေဲ လြှောကျလြှောကျဝငျကွညျ့ရငျး အရငျတုနျးက ဘယျသူတှမြေားနခေဲ့လဲ၊ အရငျတုနျးက အခနျးတှငျး အပွငျအဆငျတှကေို မွငျယောငျကွညျ့မိတယျ၊ တျောတျောကွီးကို ခမျးနားလိုကျမယျ့ဖွဈခငျြးပဲ။
နရောကတော့ သှားရလှယျပါတယျ၊ သနျလြှငျတံတားဆငျးဆငျးခငျြး သဘာဝဓါတျငှေ့ အရောငျးဆိုငျ ရှိပါတယျ၊ အဲ့ဒီလမျးကွားလေးကနေ ဝငျပွီး ညာဘကျ ခြိုး၊ ပွီးရငျ ကုနျးပျေါတကျလိုကျလို့ နညျးနညျး မောငျးလိုကျရငျ ဆုတောငျးပွညျ့ ဓါတျတောငျကုနျး စတေီတျောတဈဆူ တှပေ့ါမယျ၊ အဲ့ဒီဘေးနားက ကပျလပျြအိမျကွီးပါပဲ။
ဒီနရောက ဘယျသူပိုငျတယျ၊ ဝငျရ၊ မဝငျရ ဆိုငျးဘုတျတှဘောတှတေော့ မတှခေဲ့ရပါဘူး၊ အိမျကွီးကတော့ တျောတျောကွီး ဆှေးမွနေ့ပွေီဆိုတော့ သှားမယျဆိုရငျလဲ ကိုယျ့တာဝနျကိုယျယူပွီး အစစအရာရာ သတိကွီးကွီးထားပွီးသှားပါ၊ တဈယောကျတညျးတော့ မသှားပါနဲ့၊ လူပွတျတော့ စိုးရိမျလို့ပါ။
*** ဒီအိမျကွီးထဲကို စပျစပျစုစုနဲ့ ပွီး ရိုကျခဲ့တဲ့ အပိုငျးအစတှလေဲ ရှိပါသေးတယျ၊ ဓါတျပုံတှကွေညျ့ရတာထကျ စိတျလှုပျရှားစရာ ပိုကောငျးမှာပါ၊ စိတျဝငျစားလို့ ကွညျ့ခငျြရငျ Comment ပေးခဲ့နျော ***
နောကျထပျလညျး He & She ကနေ နရောလှလှလေးတှနေဲ့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ဖျောပွပေးသှားမှာမို့ စောငျ့ကွညျ့ပေးပါဦးနျော။